बिहेको दुई महिना नबित्दै श्रीमती पहिलेको बोयफ्रेन्डसङ्ग टाप ! २५ लाख सम्पत्तिसहित हिंडेको आ’रोप ? (भिडियो सहित):: Naya Nepal
झापा दमक–१ स्थित हवल्दार चौकका राजु न्यौपानेसँग विवाह गरी आएकी एक युवती विवाह भएको दुई महिनामै २५ लाख बराबरको सम्पत्ति लिएर बे’पत्ता भएको परिबारजनले बाताएको छ । गत असार १५ गते विवाह गरेकी २४ वर्षीय तारा बाँस्तोला ले २५ लाख बराबरको सम्पत्ति लिएर बेपत्ता भएको बेहुलाको परिवारको आ’रोप छ ।
घरमा कोही नभएको समयमा असोज ३ गते वि’पत्ता भएको परिवारका सदस्यको आ’रोप छ । घरमा सासु निदाएको बेलामा युवतीले धनमाल लिएर बे’पत्ता भएकी हुन् । उनी दमक–६ मा रहेको पसल आउँछु भनी फोनमा ताराले श्रीमानलाई जानकारी गराएकी थिइन् । युवतीले १२ तोला सुन, १२ लाख रकम र अन्य सामान लिएर वेपत्ता भएको परिवारले जनाएको छ । उनले घरमा एउटा पत्र समेत छोडेर गएको श्रीमान् न्यौपाने ले बताएका छन्
पसल आउँछु भनी फोनमा भनेकी श्रीमती बेलुकासम्म पसल नआएपछि उनीहरुले खोजी सुरु गरेका थिए ।त्यतीबेला उनीहरुले पत्र फेला पारेका हुन् श्रीमान न्यौपानेले सम्पर्क गर्दा दमककै एउटा ब्युटी पार्लरमा कपाल स्टेट र कलर गरेर पसल आउँछु भन्दै अन्तिम म्यासेज गरेको उनको भनाई छ